‘मलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गर्नु नै कांग्रेसलाई जिताउने सजिलो बाटो हो’ – NepalayaNews.com
२८ कार्तिक २०७४, मंगलवार १५:११
२०४८ देखि तनहुँबाट निरन्तर चुनाव जित्दै आएका नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सभामुखदेखि उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीसम्म भइसके। तर पहिलो संविधान सभाकालमा १८ पटक प्रतिस्पर्धा गर्दापनि प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन सकेनन्। फेरिपनि तनहुँ १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बनेका रामचन्द्र पौडेलसँग नेपालखबरका माधव धितालले गरेको चुनाव-वार्ताः
महामन्त्री सशांक कोइरालाले भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा तपार्इंको नामपनि लिनु भएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री बन्न दिनुहोला त?
कुनै पदभन्दा पनि जनता र राष्ट्रका केही काम गरौं भनेर प्रतिनिधि सभामा उठेको छु। जनताको चाहना रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्री बनोस् भन्ने हुन सक्छ। यसमा कुनै अनौठो मान्नु पर्दैन। तर, पार्टी सभापतिजीको के इच्छा हुन्छ, म प्रधानमन्त्री बन्ने, नबन्ने कुरा सभापति शेरबहादुर देउवाजीमा भर पर्छ। पार्टीलाई चुनाव जिताउने सजिलो बाटो मलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गर्नु हो जस्तो लाग्छ। चुनाव जितेर आइसकेपछि देशको नेतृत्व गरेर जनताको सेवामा तल्लीन हुने चाहना सबै नेताको हुन्छ। मलाई विश्वास छ, कांग्रेसबाट अबको प्रधानमन्त्री मै हुँ।
प्रधानमन्त्री बन्न त प्रतिनिधि सभाको चुनाव जित्नुपर्‍यो। चुनावी अभियान चाहिँ कस्तो चल्दैछ?
उम्मेदवारी दर्तासँगै मत माग्ने काम सुरु भएको छ। घरदैलो अभियानले गति लिएको छ। सधैं जनताकै साथमा थिएँ। चुनावी अभियानमा होमिँदा पनि जनताकै सुखदुःख बुझ्ने काम गरिरहेको छु। समग्र जिल्लाको विकासका लागि के के काम गर्न बाँकी छ भन्ने विषयमा पनि मतदातासँग बुझिरहेको छु।
सधैं तपाईंलाई जनताले किन भोट दिने?
सबैजना गाउँमै बसौं बसौं बनाउनका लागि। कृषि क्रान्ति, पर्यटन र रोजगारी, ऊर्जा शक्तिको विकास गरेर अब गाउँमै रोजगारी र आम्दानीको परिस्थिति बनाउनका लागि। अहिलेसम्म गाउँमा पूर्वाधारको निर्माण गराएँ, अब कच्ची बाटोहरुलाई पक्की गर्नुछ। त्यसपछि गाउँमै रोजगारीकोे अवस्था सिर्जना गर्नुछ। आम्दानीको अवस्था सिर्जना गर्नुछ। मेरा यी अधुरा सपना पूरा गर्न जनताले मलाई भोट दिनु पर्छ, दिन्छन् भन्नेमा विश्वस्त पनि छु।
स्थानीय निर्वाचनमा मतदान गर्दै कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल
मतदाताहरुले पत्याउँछन् त?
‘गरे रामचन्द्रले गर्ने हो, अरुले गर्ने होइनन्’ भनेका छन् तनहुँका जनताले। ‘तपाईंलाई नै भोट दिएर जिताएर पठाउने हो’ भनेर आर्शिवाद पनि दिएका छन्। उनीहरुकै मायाले छैटौं पटक चुनाव जित्छु।
कसरी– जवकि यसपटक एमाले–माओवादी केन्द्रले गठबन्धन बनाएका छन्!
जहिले पनि कांग्रेसका विरुद्ध गठबन्धन हुँदै आएको छ, तनहुँमा। सबै मिलेर हामीसँग चुनावमा लड्थे। हामी एक्लै लड्दै आएका छौं। र, जितेका पनि छौं। गठबन्धनले हामीलाई कुनै फरक पार्दैन।
गोविन्दराज जोशीको उम्मेदवारी खारेजीपनि राहत महसुस भएको हो?
निर्वाचन आयोगले जोशीको उम्मेदवारी खारेज गरिसकेको छ। अब उहाँले पार्टीलाई सहयोग गर्नु पर्छ। पार्टीलाई सहयोग गर्नुको अर्को विकल्प पनि उहाँसँग छैन। किनभने उहाँ पनि कांग्रेसकै नेता हो। कांग्रेसमाथि जुन प्रहार भइरहेको छ, त्यो रामचन्द्र पौडेलमाथिको प्रहारमात्रै होइन। यो सबै कांग्रेसमाथिको, लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रमाथिको प्रहार हो। यसको सामना हामी सबै कांग्रेस मिलेर गर्नुपर्छ।
उम्मेदवारी खारेजीपछि पनि जोशीले तपाईंविरुद्धको अभियान छोडेका छैनन्। यसले, चुनावी परिणामलाई असर त गर्ला नि। होइन ?
जोशीको आवेग क्षणिक हो। उहाँको त्यो क्रमशः अभियान सिथिल हुँदै जान्छ।
२०४८ मा चुनाव जितेपछि नफर्किएको तनहुँ–१ मा २६ वर्षपछि फर्कनु भएको छ। कत्तिको चुनौती छ?
सिंगो तनहुँ मेरो क्षेत्र हो। २०४८ मा तनहुँ– १ र त्यसपछि तनहुँ–२ बाट चुनाव लडेर जित्दै आएको हुँ। अहिले २ नम्बर क्षेत्रको केही भाग क्षेत्र नम्बर १ मै गाभिएको छ, जहाँ मेरो बसोबास पनि छ। त्यसैले हार्ने भएपछि तनहुँ–१ मा फर्कियो भन्ने कुरा गलत हो।
निर्वाचनमा कांग्रेसको अवस्था कस्तो होला?
वामगठबन्धनले अलिकति असहज परिस्थिति बनाउन खोजेकै हो। तर, त्यो सफल हुँदैन। उहाँहरु (कम्युनिष्ट) मिलेर देशमा कम्युनिजम् ल्याउने जुन सोच बनाउनु भएको छ, त्यो नै उहाँहरुकै लागि घाँडो हुन्छ। कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्दापनि कांग्रेस राम्रो पोजिसनमा रहन्छ।
बिदेश जानु पलायन होईन पलाउन जाने हो – गायक बुद्धिसागर बस्याल	१४ असार २०७६, शनिबार १०:१९
टेक्सासमा दुई प्रहरी अधिकारीमाथि गोली प्रहार, हत्याराद्वारा आत्महत्या २८ कार्तिक २०७४, मंगलवार १५:११
टेस्लाले घटायो मोडल वाई एसयूभीको मूल्य २८ कार्तिक २०७४, मंगलवार १५:११
योग्यतामा आधारित आप्रवासन प्रणाली स्थापनाको लागि कार्यकारी आदेश ल्याउँदै ट्रम्प २८ कार्तिक २०७४, मंगलवार १५:११